Waxyoon iyo aqoon loogu talagalay dadka jecel freeride | Ski | Baraf - ULLER
Dareenka xorriyadda ee buurtu siiso ayaa kaliya lagu sifayn karaa runta "fuulayaal bilaash ahKa yimid wadnaha. Qabowga, barafka, neecaawda iyo aragtiyaha cajiibka ah ee uu nagu raalli gelinayo, waa kuwo aan qiimo lahayn. Lovers of sports buurta, waxay leeyihiin cad! Ku dhaqanka dhammaan maadooyinkani waa kuwo xiiso leh isla mar ahaantaana raaxo leh, jimicsi dalbanaya oo ku lug leh jirka oo dhan oo hagaajiya dulqaadka. Xilliga barafka waa halkan waana waqtigii sida ugu wanaagsan looga faa’iideysan lahaa qaar ka mid ah cayaaraha ugu caansan sida barafka iyo barafka, inkasta oo sannadkan cusub ee 2021, uu sidoo kale kugu martiqaadayo inaad laylis ku sameysid ciyaaro kale oo buuro leh, oo aad ku raaxeysan karto howlaha banaanka. hawo nadiif ah.
Freeriders xad ma leh! Adrenaline waa mishiinka nagu riixaya inaan marwalba dhaho haa khibradaha iyo khibradaha cusub. Kani waa ruuxa loo baahan yahay markii la fuulo buurta. Taasi waa sababta isboortiga buuraha ee xilliga qaboobaha ay yihiin kuwa ugu daran uguna doorbidaan freeriders. Haddii waxa aad raadineyso sannadkan ay tahay inaad nafta u qaaddo si xad-dhaaf ah, fiiro gaar ah u yeelo cayaaraha buuraha ee ka qaylinaya xorriyadda!
BUURKA GOOBAHA… XORRIYAD KELIYA AY LEEDAHAY MADAXDA!
Waxyoon iyo aqoon loogu talagalay xorriyadda runta ah!
Xaqiiqdii waad horay u maqashay cayaartan!
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu caansan tartanka xilliga qaboobaha. Barafka Alpine wuxuu ka kooban yahay soo degida waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah ee buuraha dhex mara, kana gudbaya wadiiqooyinka calaamadeysan, oo leh waqti go'an illaa boqollaal ilbiriqsi
In kasta oo ay tahay ciyaar caan ah, marar badan ayaan isku wareersanahay marka la aqoonsanayo kala duwanaanshaha hababka kale. Waa kuwan qaababka qaarkood:
Barafka Alpine waxaa lagu gartaa cidhibta bootka ee ku dhegsan boodhka barafka.
Iyada oo la adeegsanayo qaab farsamo si loo fuulo buurta, taas oo ah halka uu ku bilaabmayo.
Dhaqdhaqaaqa Zigzag si aad u gaarto xawaare sare uguna dhaadhacdo dhaadhaca sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
Nidaamkan dhexdiisa, waxaad sidoo kale ka heli kartaa habab kala duwan:
Waa dhacdada barafka barafka leh ee leh albaabbada ugu badan, aadna isugu dhow. Cayaartooygu waa inuu sameeyaa leex leexasho iyo deg deg ah, maxaa yeelay mid waliba waa inuu ku wareegaa midig ama bidix midba midka kale.
Qaab kale oo farsamada qaloocintu muhiim tahay. Xaaladdan oo kale, irdaha ayaa ka sii fog marka loo eego Slalom.
Waa habka lagu ordo barafka alpine-ka oo leh xawaaraha ugu sareeya iyo meesha ay albaabadu badanaa aad u kala fog yihiin.
Super slalom weyn
Waxaa loo yaqaan Super-G. Waa tijaabo xawaare ah, oo leh leexasho badan oo dhaadheer iyo mid dhexdhexaad ah, iyo albaabbo badan oo ku yaal meel u dhow midba midka kale.
Barafka barafka waa mid ka mid ah cayaaraha xagjirka ah ee loogu jecel yahay buurta!
Awood u lahaanshaha inaad ku siibto oo aad ku sameyso baraf dusha sare waa mid ka mid ah dareenka ugu badan ee la doonayo xilliga qaboobaha. Isboorti ka sokow, isboorti sidoo kale waa tartan, wuxuu u baahan yahay jilicsanaan badan iyo dareen isku dheelitiran.
Sidaad ogtahay, barafka lagu ciyaaro waxaa loo qaybiyaa qaybo kala duwan, oo laga bilaabayo xaraashka, kaas oo ka kooban maadooyinka kalabadh, hawo waawayn iyo rubpipe. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira noocyo kale oo freeride ah oo ay ciyaartooydu sidoo kale jecel yihiin: slalom barbar socda, boardercross iyo buuraha barafka.
Barafka iyo barafka labadaba, waxaad ku dareemi kartaa xorriyad dhab ah dhammaan muujinta.
Miyaad horeyba u taqaanay FREERIDE?
Freeride Isbaanishka macnaheedu waa “fuushan lacag la’aan”. Waa in la dareemo xorriyad dhammaystiran, oo aan xad lahayn buurta, iyadoon loo eegin caqabadaha, foorarka ama walxo kasta oo hareeraha ka jira. Waa in lagu raaxeysto dabeecadda saafiga ah, maaddaama ay ka kooban tahay ka leexashada meelaha dhaadheer, meelaha barafka bikradda ah iyo meelaha dhaadheer ee halista ah.
Waan ognahay in tacabirku kuu yeerayo, laakiin aad ayey muhiim u tahay inaad khibrad hore leedahay iyo aqoonta lagama maarmaanka u ah inaad ku raaxeysato edbintan oo aadan ku dhaawacmin.
Xoriyada waxaad ku jirtaa dhinaca duurjoogta ee buurta. Sidaa darteed, waa inaad leedahay heer cayiman oo barafka ama barafka lagu riixo si aad awood ugu yeelatid hoos u dhigista dhinacyo ka adag kuwa dhaadheer. Waa inaad awood u yeelatid isboortiga.
Iyo sidoo kale, aqoonso nooca barafka. Waxaa jira qolof, dabayl, baraf adag, boodh, iwm. Marwalba ma helno baraf isku mid ah markaan barafka wadno.
Barafka budada ah ayaa ugu fiican kan ka baxsan-piste maadaama uu si dhib yar u siibmayo isla markaana uu si fiican u hagayo barafka. Had iyo jeer sidaas xaalku ahaan maayo. Sababtaas awgeed, barafka lagu ciyaaro noocyada kala duwan ee barafka ayaa ku siin doona waayo-aragnimadaas, haddii aad joogtid meel leh xaalado kala duwan.
Waxaa lagugula talinayaa inaad markasta lasocoto markaad wadada kabaxdid, hadiiba ay wax dhacaan oo aad caawin karto. Freeride waa waxqabad xad-dhaaf ah, mana aha mid aan halisteeda lahayn. Ku ilaalinta naftaada qalabka saxda ah ugu yaraan, waxay noqon doontaa xitaa lagama maarmaan inaad kahortagto oo aad u sameyso qaab waxoogaa aamin ah.
Isticmaal koofiyad, muraayado, arva iyo majarafad. Ugu dambeyntii laakiin uguyaraan, halista qulqulka barafka waa in lagu xisaabtamo, taasi waa sababta ay lagama maarmaan u tahay in laga feejignaado xaaladda barafka, u janjeera jiirada, xisaabinta boodada iyo ka hortagga sida ugu macquulsan.
Maaddaama aan ognahay in buuraha iyo waddooyinka bilaashka ahi ay ku dhiirrigelinayaan, fiiri qaar ka mid ah meelaha ugu fiican ee freeride:
La Grave, Faransiiska
Dalxiiska Faransiiska waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu xoreeyo dhammaan Alps. Meel aad kaliya kaga boodi karto dhinaca duurjoogta dhinaceeda.
Waxaan sii wadaynaa booqashada Faransiiska. Midigta cagta Mont Blanc. Waxay ahayd goob loogu talagalay daabacaadda 2015 ee Freeride World Championship. Waxaa loo arkaa inay tahay jaangoyn caalami ah oo loogu talagalay cayaaraha xad-dhaafka ah.
Jasiiradaha Lofoten, Norway
Waxay ku taal woqooyiga Arctic Circle. Waa janno loogu talagalay dadka jecel freeride.
JACAYLAYAASHA XORNIMADA AH EE U MUDAN "RAAC"
Aymar Navarro (@aymar_marvar)
Isagu waa ciyaaryahanka kaliya ee Isbaanish ah ee ku guuleystay inuu gaaro Socdaalka Dunida Freeride. 2019 waxaa lagu soo daray TOP 10 ee ciyaartoyda adduunka oo dhan, kuwaas oo xukuma anshaxan.
Ninka reer France ee Candide Thovex waa mid caan ka ah adduunka, kana mid ah dunida barafka lagu ciyaaro. Isagu waa fardooleyda kaliya ee guuleystey, marka lagu daro Freeride World Tour, seddex biladood oo dahab ah ciyaaraha X, seddex qaab: Big Air, Superpipe iyo Slopestyle.
Baaskiilkii reer Talyaani wuxuu ku guuleystay Socdaalkii Adduunka ee 'Freeride World Tour' ee daabacaaddii sanadaha 2018 iyo 2019. Barta 'instagram' waxaad ka heli kartaa fiidiyowyo iyo sawirro khiyaanooyinkeeda iyo waayo-aragnimadeeda freeride.
Núroa Castán (@AbdisalamAato)
Tixraaca Isbaanishka ee barafka loo yaqaan 'Snowboarding' kaas oo u suurtagashay inuu galo Freeride World Tour. Dhawaan wuxuu bilaabay vlog-kiisa cusub halkaas oo uu ugu sheegayo xiisaha maalintiisa.
Fuushan faransiiska oo aan ka daali doonin ku talinta. Wuxuu awooday inuu ku guuleysto Freeride World Tour seddex sano oo isku xigta, intaas waxaa sii dheer, Worlds iyo X Games in Snowboard Cross. Bartiisa Instagram-ka, wuxuu ku muujiyay aabbe ahaan, isagoo la wadaagaya sawirro iyo muuqaallo gabadhiisa ah. Ma u baahan tahay sababo badan oo aad u raacdo?
Fuulashada barafku waa mid ka mid ah howlaha ugu xiisaha badan ee taga buurta. Cayaartani waxay ka kooban tahay kor u qaadista dhulka dabiiciga ah ee buuraha ama biya-dhaca barafka. Waxay u baahan tahay iska caabin badan, marka lagu daro walxaha ku habboon ee u oggolaanaya fuulitaanka inuu ku hormaro noocyada dusha sare. Inaad ku jirto meelo qabow badan iyo baraf badan, waxay kordhisaa dhibaatada iyo halista. Sidaa darteed, tacabiirayaashu waa inay kujiraan xaalad jireed oo wanaagsan iyo qalab nabdoon si looga hortago shilal ama dhicitaan kasta, heerkulka ka hooseeya eber.
Haddii aad ku dhiirratid inaad tijaabiso, waxaan kuu daayeynaa talooyin qaar ka mid ah meelaha cajiibka ah ee barashada fuulitaanka barafka:
Fox iyo Franz Josef Glaciers, New Zealand
Waa meesha ugu fiican kuwa doonaya inay bilaabaan iyo haddii aad sidoo kale rabto inaad lasocoto asxaab badan oo xirfadlayaal ah. Meeshu waxay leedahay hagitaanno xirfadlayaal ah oo lagu dalxiis tago muraayadda baraha leh iyada oo loo marayo helikabtar ama diyaaradaha barafka.
Meel sixir ah oo la booqdo, oo ku habboon tababarka fuulista maaddaama ay bixiso heerar sare oo dhan iyo baraf caddaalad ah oo ammaan ah. Wadooyinka ugu caansan waa Chia iyo Pegasus oo ku yaal aagga Amphitheater, iyo Dropline iyo Dracula oo ku yaal aagga Dropline.
Mid ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay bilowga Yurub, in kasta oo ay sidoo kale bixiso kicin khubaro. Waxay leedahay meelo caan ah sida Crack Baby, Blue Magic iyo Black Nova.
XORRIYADDA KU DHEH SI taxaddar leh
Dhamaan waxqabadyada buurta waxay u baahan yihiin aqoon hore iyo u diyaar garow si aad si buuxda ugu raaxeysan karto isboortiga iyo adrenaline. Waxaan leenahay ruux soo jiidasho leh waxaanan dareemeynaa xamaasad isboorti oo sidaada oo kale ah, sidaa darteed amniga meel ugama dhigeyno waxaanna tixgelineynaa wax kasta oo lagama maarmaan u ah ku ciyaarista cayaaraha buuraha:
Qalabka loo baahan yahay:Sidii aan horeyba u soo sheegnayba, aad ayey muhiim u tahay in la helo qalab lagama maarmaan ah oo ku filan oo lagu tababaro isboortiga aad dooratay. Kahor intaadan dhaqaaqin, hubi inaad haysato dhammaan qalabka, iyo inay xaaladoodu wanaagsan tahay.
Dhar ku habboon:Markaad aadeyso meelaha kuleylkeedu aad u hooseeyo, waxaa lagama maarmaan ah inaad xirato dhar ku habboon isboortiga si aanad ula kulmin wax dhibaato ah ama aad khatar u geliso caafimaadkaaga.
Xaaladda jirka:Markaan tixgalino isboortiga la qabanayo, hubi inaad jimicsi sameyso oo aad u diyaar garowdo jimicsi iyo nafsi ahaan howlaha heerkulka hooseeya.
Raac talooyinka:La tasho kahor qorshaynta howlaha. Raadi oo dhageyso talooyinka khabiirka ah oo aad raacdo tilmaamaha kuwa khibrada ugu badan ku leh goobta.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu hage u ahaa hal-abuurkaaga xiga ee buuraha iyo inaad ku dhiirato caqabadaha cusub sanadka 2021. Waxba yaanay kaa hor istaagin xorriyadaha! Adigana, maxay xorriyadda macnaheedu tahay?
Wax dheeri ah ka baro baraf barafka Katia Martinez!
Waxaan ku faraxsanahay inaan ka helno booqasho qaas ah Santander gacanteena Katia Martínez, xirfadle xorriyad leh, baraf baraf iyo surwaal, iyo wixii ka sarreeya, tusaale cad oo ruux ah
Kuwani waa faa'iidooyinka u ah xidhashada muraayadaha birlabta ee barafka!
Barafka ama barafka lagu ciyaaro ayaan ciyaar aheyn. Kuwani waa isboorti xad-dhaaf ah oo u baahan diyaarin iyo xaalado ku habboon. Waxa ugu muhiimsan waa inaad ku darto tayada ugu fiican qalabka taas
Lugoodyada ugufiican Yurub si aad u xirtaan muraayadaha barafka xilligan barafka!
Taageerayaashu waxay u diyaariyaan muraayaddooda barafka si ay si buuxda ugu raaxaystaan ​​xilliga barafka Halkan guji oo soo hel kuwa ugu yaabka badan Yurub! Miyaad horeyba u ogeyd midka t
Baro isbeddellada ugu dambeeya ee muraayadaha indhaha ee 2021!
Labada xirfadle iyo kuwa bilowga ahba waa inay indhahooda ku ilaashadaan muraayadaha indhaha Shaki la'aan waxaa la joogaa waqtigii dib loo cusbooneysiin lahaa kanaga xilligan. Sii wad akhriska oo soo hel faa'iidooyinka